ဖောက်သည် အတွေ့အကြုံ - နောက်တစ်ခု ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက်
Pooch Friendly ထောက်ပံ့မှု ဦးစွာ၊ ဤထုတ်ကုန်ကို ကျပန်းတွေ့ပြီး ငါလုပ်လိုက်တာထက် ပိုမပျော်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကို မြန်မြန်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် အချိန်အများကြီး သက်သာစေပါလိမ့်မယ်။၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးသည် ကောင်းမွန်ပြီး၊ သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို တည်ဆောက်ရာတွင် ကူညီရန်အတွက် စိတ်ကြိုက်သင်္ဘောတင်တိပ်နှင့် သေတ္တာများကို ပေးဆောင်ပါ။ ၎င်းတို့၏ အခမဲ့အစီအစဉ်သည် ထုတ်ကုန် 1,000 ထည့်သွင်းနိုင်သည့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပို့ဆောင်သူများကို ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်ကို ပေးပါသည်။US သို့ ပို့ဆောင်ချိန်သည် 5-9 ရက်ခန့်ဖြစ်ပြီး Aliexpress နှင့် အခြားသောကုမ္ပဏီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး ၎င်းတို့၏အက်ပ်အတွက် ၎င်းတို့၏အစီအစဉ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အပ်ဒိတ်များ ပေါ်ပေါက်လာမည့်အချိန်ဘောင်နှင့်အတူ ၎င်းတို့၏ အပ်ဒိတ်များ ပေါ်ပေါက်လာမည့် အချိန်ကာလနှင့်အတူ ၎င်းတို့၏ တိုက်ရိုက်ချတ်ကို အသုံးပြုရန် အခွင့်အရေးရခဲ့သည်။တစ်ခါတစ်ရံတွင် ချတ်အေးဂျင့်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောသည့်အခါတွင် ၎င်းသည် သင့်မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရုံမျှသာဖြစ်ပြီး လူကောင်းမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့နှင့် စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းသည် ၎င်းတို့အားလုံးကို ဂရုမစိုက်ပုံပေါ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို အမှန်တကယ် ဂရုစိုက်ကြောင်း သင်ပြောပြနိုင်သည်။ကျွန်ုပ်၏ချတ်ကို ပို၍စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ထားခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်၏စတိုးဆိုင်နှင့် ဆက်သွားရန် စိတ်အားထက်သန်ပြီး ၎င်းကို အမြန်ဆုံးဖွင့်ရန် ပိုမိုစိတ်ထက်သန်ပါသည်။အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
ပျော်ရွှင်စရာ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏စတိုးဆိုင်အတွက် ပို့ဆောင်မှုအမှာစာများအတွက် အသစ်ဖြစ်ပါသည်။NextsChain သည် အမြန်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် တိုးလာခဲ့သည်။ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသောကြောင့်၊ ဝန်ဆောင်မှုကို ရှင်းပြပေးသော ဖော်ရွေပြီး တတ်ကျွမ်းသော လက်ထောက်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောရန် Chat box ကို အသုံးပြုပါသည်။ပို့ဆောင်မှု မြန်ဆန်ပြီး ဂရုတစိုက်နဲ့ ပို့ဆောင်ပေးမှာ သေချာပါတယ်။Nextschain သည် ကျွန်ုပ်အတွက် ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ကုန်အချက်အလက် အဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။အချိန်ကုန်သက်သာစေတဲ့ သူတို့အသေးစိတ်အချက်လေးတွေကို အထူးဂရုစိုက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မာတီနက်ဇ်
ThePretty.me မယုံနိုင်လောက်အောင် ကောင်းမွန်သော သင်္ဘောဝန်ဆောင်မှု။ကျွန်တော်သုံးဖူးတဲ့ အရင်းအမြစ်နဲ့ ပို့ဆောင်ရေးအက်ပ်တွေအားလုံးထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် dropshipping ကို ပိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သင့်အတွက်စံပြ အကယ်၍ သင်သည် ဤ 2020 တွင် dropshipping ကိုစတင်ရန်ရှာဖွေနေပါက သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေရာမှန်ကိုမကြည့်ဘဲ၊ Nextchain တွင်အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကူညီရန် အနည်းငယ်ကလစ်နှိပ်ရုံဖြင့် သင့်အောင်မြင်မှုရရှိရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုပေးသည့်ကိရိယာများရှိပါသည်။ သင်ဖြေရှင်းပြီး သင့်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပါ။Nextchain သည် သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။
ဝိုင်နှင့် ကော်ဖီချစ်သူ ဤအက်ပ်ကို လအတော်ကြာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏စတိုးဆိုင်အတွက် ကျွန်ုပ်၏သွားသည့်အက်ပ်ဖြစ်သည်။အခြားပြည့်စုံသောအက်ပ်များတွင် ရှာမတွေ့သော ထုတ်ကုန်များကို ဤနေရာတွင် ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်သည် oberlo ကိုအသုံးမပြုဘဲ aliexpress ကိုမသုံးချင်ပါ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်္ဘောတင်ချိန်များသည် ကြောက်စရာကောင်းပြီး သင်သည် မတူညီသောရောင်းသူတစ်သန်းနှင့် ဆက်ဆံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။Nextschain သည် အရာအားလုံးကို ဂရုစိုက်သည်။သင်သည် မှာယူမှုတစ်ခုရရှိပြီး လက်ကားပေးချေပြီး ၎င်းတို့သည် ထုပ်ပိုးပြီး ကုန်ပစ္စည်းကို ပို့ဆောင်ကာ သင်္ဘောအတည်ပြုချက်အီးမေးလ်ကို ပေးပို့ပါသည်။ပြဿနာတစ်ခုခုကြုံလာရင် သူတို့က မင်းဆီပြန်လာပြီး ပြင်ပေးတယ်။ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ဒါက droppshippers အတွက် အကောင်းဆုံး ပြည့်စုံတဲ့ app ဖြစ်ပါတယ်။
OM Fashion Boutique Nextschain အတွက် အရမ်းပျော်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာ ကုန်ပစ္စည်းများစွာနှင့် ဝတ်စုံဝန်ဆောင်မှုကောင်းများ။
ကျွန်တော့်မှာ ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပြီး သူတို့က ချက်ချင်းကူညီပေးပြီး ကျွန်တော့်အတွက် ပြင်ဆင်ပေးတယ်။
NextsChain ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Acoti ၁ ဤသုံးသပ်ချက်ကို မရေးမီ အနည်းဆုံး2လလောက် ဤအက်ပ်ကို ကျွန်ုပ်ရှိခဲ့သည်။အသုံးပြုမှု ပထမနေ့တွင် ပေးထားသော သုံးသပ်ချက်များစွာကိုဤသည်မှာ ကောင်းမွန်သောအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အချိန်အတိအကျ ပေးပို့ထားသည့် နမူနာအမှာစာကို ကျွန်ုပ် ပြီးမြောက်ပြီးပါပြီ။အောင်မြင်စွာနဲ့ ကုန်ပစ္စည်း 150 ထက်မနည်း တင်သွင်းခဲ့တယ်။တစ်ကြိမ်လျှင် အချိန်မီတုံ့ပြန်မှုဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုသို့ အနည်းဆုံး5ကြိမ် ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ဤအက်ပ်ကို မည်သူမဆို ကျွန်ုပ် အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။NextsChain အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီသုံးသပ်ချက်မှာ ငါထည့်နေတယ်။Nextschain နှင့် ပက်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ တကယ့်အတွေ့အကြုံကို လူတိုင်းအား အသိပေးလိုပါသည်။ပထမတော့ ငါက အချိန်စတိုးဆိုင်ကြီး မဟုတ်သေးဘူး၊Nextschain ဖြင့် ကျွန်ုပ်၏အမှာစာများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပြဿနာမရှိခဲ့ပါ။သင်၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Aliexpress ကို သင်အသုံးပြုပါက ၎င်း၏အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များကို ဖတ်ရှုရန် လိုအပ်ပြီး ပို့ဆောင်မှုအတွက် ပိုကြာတတ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် သင်သည် အမြန်ပို့ဆောင်လိုပါက ပြည့်စုံမှုအတွက် NextsChain ကို အသုံးပြုပါ။ကျွန်ုပ်၏ အမှာစာများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် မည်သည့်ပြဿနာမှ မကြုံခဲ့ဖူးပါ။ပြီးတော့ အကြီးမားဆုံးကတော့!!!ဒီဇင်ဘာ 12 ရက်နေ့ မှာ customer တစ်ယောက်က အော်ဒါတင်ခဲ့တယ်။အဲဒါကို ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်ပူတယ်။အော်ဒါတင်ပြီး 11 ရက်အကြာတွင် customer များထံရောက်ရှိသွားပါပြီ။ခရစ္စမတ်နဲ့ ဖောက်သည်တွေ ရောက်နေတဲ့အချိန်မို့ ကျွန်တော် လုံးဝကို ပျော်သွားတယ်။NextsChain ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ကြယ် ၁၀ ပွင့်။
Vegan Apple Watch Bands အခြားပေးသွင်းသူများထံမှ ရက်ပေါင်း 20 မှ 40 ရက်အထိ ပို့ဆောင်ချိန်အလွန်များသောကြောင့် ဖောက်သည်များအား ယူကေသို့ အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း (နောက်ဆုံးတွင် ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်နိုင်ချေ) ကို ကမ်းလှမ်းလိုသောကြောင့် ဤအက်ပ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ငါ့မှာ တိကျတဲ့ ထုတ်ကုန်အထူးအခွင့်အရေးတစ်ခုရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် ငါ့ရွေးချယ်စရာတွေက အကန့်အသတ်ရှိမှာကို ငါစိုးရိမ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် အများကြီးရှိတယ်။ကျွန်ုပ်တွင် တင်သွင်းရန် စောင့်ဆိုင်းနေသော ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း ၁၆၀ ကျော်ရှိပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် ကောင်းမွန်လှသည်။ကုန်ပစ္စည်းအမည်များသည် လှပသပ်ရပ်ပြီး ဈေးနှုန်းများသည် dropshipping စသည်တို့အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှတစ်ဆင့် အမှာစာလက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပါ (ယခုမှစပြီးပါပြီ) ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူအတွက် မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကို မသေချာသေးသော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ အတွေ့အကြုံက အခုထိ အရမ်းကောင်းတယ်။
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည်လည်း ထူးခြားပါသည်။သူတို့က တကယ်ကို ယဉ်ကျေးပြီး အထောက်အကူဖြစ်ပြီး သင်နဲ့ စကားပြောဖို့နဲ့ သင့်မေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ အချိန်ယူပါ။အလွန်တုံ့ပြန်မှု။ငါ အခုထိ တကယ်ကို သဘောကျနေတယ်!
Cartersgoods ဤအက်ပ်သည် ဂိမ်းပြောင်းလဲပေးသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ အလွန်ကောင်းမွန်သော ပို့ဆောင်ချိန်များ နှင့် အမြတ်အစွန်းရရှိရန် စျေးနှုန်းများ ကြီးမားသော အခန်းဖြစ်ပြီး ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု ကိုယ်စားလှယ်များသည် ကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းဖူးသမျှ ပြဿနာတစ်ခုတွင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးကာ သင့်လျော်သောအချိန်တစ်ခုအတွင်း ထိုနေ့တွင်ပင် ပြေလည်သွားပါသည်။အမိုက်စားအက်ပ်။ပစ္စည်းအများစုသည် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။